အဆိုတော် Vitale က Mike Le Bosso - teles relay ကိုရက်စက်စွာအရှက်တကွဲဖြစ်စေခဲ့သည်
အဆိုတော် Vitale က Mike Le Bosso ကိုရက်ရက်စက်စက်နှိမ်နင်းခဲ့သည်
By နေပြည်တော် On စက်တင်ဘာ 15, 2020
အဆိုတော် Vitale ကပြသနာစီစဉ်သူ Mike Le Bosso ကိုသူမကူညီမယ်လို့ကတိပေးပြီးသူမနဲ့အိပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကိုရက်ရက်စက်စက်စွဲချက်တင်ခဲ့တယ်။ အပြင်းအထန်ယိမ်းယိုင်နေသည့်အနုပညာရှင်က Mike ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏မအောင်မြင်သောလုပ်ရပ်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါအဆိုတော်သည်သိုင်းကြိုးများကိုပြင်သစ်ရှိပြပွဲများထုတ်လုပ်သူအဖြစ် Ivory Coast ရှိအနုပညာရှင်အတော်များများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် Ivorian Mike Le Bosso သို့သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ပြပွဲကိုစီစဉ်သူက Vitale နဲ့ Facebook မှာပါ။ သူမသည်သူမနှင့်ထုတ်လုပ်သူကန်တီဖာအကြောင်းကိုစကားပြောဆိုခဲ့သည်။ သူမက Mike Le Bosso ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရသူမအတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်သူမ၏ဗီဇာအတွက်ပေးဆောင်ကြောင်းပြသသည်။
Vitale သည်သူ၏ ၂ လကြာဗီဇာကိုရရှိသည့်အခါတူညီသောငွေပမာဏကိုထပ်မံပေးချေခြင်းမပြုမီ FCFA အနေဖြင့်အစကန ဦး ပေးချေလိမ့်မည်။ ပန်းချီဆရာတစ် ဦး ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ထုတ်လုပ်သူကမစ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအားလုံးကိုယူဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပေမယ့်သူကပြင်သစ်အတွက် Visa ရရှိဖို့ FCFA ၁ သန်းပေးရမယ်။ ထိုအလျင်မြန်စွာ, စကားပြောဆိုမှုပြပွဲ၏ထုတ်လုပ်သူထင်ထံမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်တောင်းဆိုမှုများမှလှည့်။
Vitale ကသူ၏သက်သေခံKantéဖာရိုကိုမေးသည် "သူ Mike Le Bosso ကိုရိုက်တာလား" အနုပညာရှင်ထုတ်လုပ်သူမှတုံ့ပြန်မှု "သူကပင်သင်တို့နှင့်အတူပါသေးတယ်!" သူမသည်နောက်တဖန်ပြော၏ "သူကငါနဲ့အတူအိပ်ချင်တာလား" […] ငါသူလက်ထပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်သူကဂရုမစိုက်ဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်…” အနုပညာရှင်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူကသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်ပြင်သစ်သို့ရောက်ပြီးနောက် Vital ကိုဟိုတယ်တစ်ခုသို့ပို့လိုက်သည်ကိုဖော်ပြရန်။
Mike Le Bosso ကဗီတာမင်တွင်သူနှင့်သူနှင့်ပရောပရည်လုပ်နေသူဖြစ်ပြီးပြင်သစ်တွင်တစ်ချိန်ကသူသည်အရေးယူရန်သူ့ကိုလက်နက်ချခဲ့ခြင်းကြောင့်ဤဖွင့်ဟမှုများအားလုံးထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ မုသာသွားသည့်အရာနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသောအခါကန့်ဖာရိုကရယ်မောပြီးနောက်ပြောခဲ့သည် “ မဟုတ်ဘူး၊ မိုက်ကမလုပ်နိုင်ဘူး။ မက်ဆေ့ခ်ျများသည်ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ရှိခဲ့သည် မင်းကိုသူပို့လိုက်တဲ့စာတွေအားလုံးငါ့ရှေ့မှာရှိနေတယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှငါမထိမ်မဝှက်”.
ပြဇာတ်ထုတ်လုပ်သူ၏ပုံရိပ်သည်ဆက်လက်ပြိုလဲနေပြီးသူ၏လိမ်လည်မှုနောက်တစ်ခုကိုလည်းဖော်ပြလိမ့်မည်။ Vitale ၏ဖျော်ဖြေမှုအပြီးတွင်တေးဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူသည်အနုပညာရှင်အားပြန်ပေးဆပ်စရာမလိုဘဲယူရို ၂,၅၀၀ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Vitale ကသူ့ရဲ့ Mike Le Bosso ကိုသူနဲ့အကြံဥာဏ်ပေးတယ်။ "သင် pacifier ကိုလူတို့အားနောက်တဖန်ပြသခြင်းမပြုရ။ " သင်နှင့်အတူအိပ်ခဲ့ကြသောမိန်းကလေးများအားလုံးကိုကျေးဇူးပြုပါ။ အောက်မှာကြည့်ပါ။
ဘတ်: နောက်ဆုံးတွင် The-Date-of-the- မင်္ဂလာဆောင် -of-the- အနုပညာရှင် - ခမ်းနား - p-with-eudoxie-yao-is- လူသိများ /
ဤဆောင်းပါးသည် https://afriqueshowbiz.com တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်ခဲ့သည်
ဤ Carmen Sama ဗီဒီယိုသည်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များမှဆူညံသံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
Houon Ange Didier ၏မုဆိုးမ Arafat DJ သည်ချမ်းသာသောမာလီလူမျိုးစီးပွားရေးသမားနှင့်ဆက်ဆံမှုတွင်။